Imala qilleensaa - BBC News Afaan Oromoo
Softiweriin dhaabbati Boeing fooyyesse jedhe to'attoota Ameerikaan mirkanaa'uu qaba.
Paayileetonni 'Boeing' irraa sodaa nageenyaa qabaachuu xiyyaarrii Itoophiyaa kufuu dura beeksisan
Paayileetotni daandiwwan Xiyyaaraa Ameerikaa xiyyaarrii Itoophiyaaa 737 Max kufuu isaan ji'oota dura sodaa nageenyaa akka irraa qaban beeksisanii ture.
Xiyyaarri 'Boeing 737' wayita qubachuuf jedhu laga Filooriidaa lixe
Xiyyaarri imaltoota 143 baatee ture wayita buufata xiyyaaraa Jacksonville qubachuuf jedhutti sababa rooba hamaa bubbee makateen dhiibamee gara lagaatti dabuu danda'eera.
Balaa Xiyyaaraa Itoophiyaa: Bu'aan 'Boeing' dhibbeentaa 20'n hir'ate
'Boeing' bu'aan kurmaana duraa bara kanaa dhibbeentaa 20'n hir'achuu beeksise.
24 Ebla 2019
American Airlines dhorkaa Boeing Max 8 akka hin balaliine irra jiru dheeresse
Kaampaaniin Boieng soofti weerii haaraa hojjechaa jira.
Balaan guutuu addunyaa rifachiisee ji'a har'aa ture kan mudate. Gabaasa jalqabaa qorannoo ka'umsa balaa kanaarraa ka'uun daqiiqaawwam jaha xiyyaarichi qilleensarra ture maaltu ta'e waan jedhu xiinxallee jirra.
10 Ebla 2019
Balaa ET302'n walqabateen Boeing irratti himanni baname
Kampaanii xiyyaara omishu Boeing irratti balaa xiyyaaraa ja'a kana gara jalqabaa Itoophiyaatti qaqqabeen Mana Murtii Federaalaa Ameerikaatti himanni baname.
Boeing sirreeffama xiyyaara 737 Max ifa taasise
Kaampaniin xiyyaara omishu 'Boeing' gosa xiyyaarota isaa lama kufanii caccaban irratti sirreeffama taasise.
Balaa Xiyyaara ET302: Dhuguma leenjiin paayilatootaa balaa sana waliin walqabataa?
Qorannoon balaa xiyyaara Itoophiyaa ET302 qaqqabe reefuu kan jalqaba irra jiraau ta'ullee yaadonni maal ta'inna jedhamu kennamaa jiru. Gabaasni miidiyaalee gara garaa irratti Kamisa bahan garuu kallattii biraa akeekuun isaa dubbii namoonni wal harkaa fuudhanii dubbachaa jiran ta'eera. Shaakallii paayiletoonni duraan fakkeessanii shaakaluu balaa uumame waliin wal qabataa laata?
Gosa xiyyaaraa ittiin imalluu akkamiin barra?
Imala Xiyyaaraaf wayita qophoofnu gosa xiyyaaraa ittiin imalluu akkamiin barra?
Balaa Xiyyaaraa ET302: 'Gaafa sana garuu xiqqoo itti barfatee na hin dhungatiin deemte' Haadha Ayyaantuu Girmaayee
Namoota balaa Xiyyaaraa ET302 tiin lubbuun darbe keessaa keessummeessituun xiyyaaraa Ayyaantuu Girmaayee tokko turte. Ayyaantuun shamarree ganna 24tti. Harmeen Ayyaantuu gadda jabaa itti jiraniifi waa'ee hintala isaanii dubbatu.
Balaa Xayyaaraa ET302: Saanduqni odeeffannoo 'black box' Paaris gahuun qorannoon eegaleera
Saanduqa odeeffannoo imalaa 'black box' balalii ET302 Paaris gahuusaa fi qorannoonis eegaluusaa Reuters gabaaseera.
Xiyyaarri Boeing 737 Max 8 yoo xiqqate hamma 'Caamsaatti' balaliinsa irraa dhorkame
Xiyyaaroonni Boeing 737 Max 8 fi 9 osoo qorannoon sooftiweerii irratti hin godahami balaliinsa dhorkamanii jiru
ET302: Namni Yaareediif rifeensa sirreessu, 'Haati isaa yoo na agartu ilmikoo ni dhufa naan jetti' jedha
Kaapteen Yaareed rifeensa isaa na biratti sirreeffata. Keessattuu wayita boqonnaa isaa fi guyyaa ayyaana kirismaasiifaa wayita gara Naayiroobii dhufu ana biratti sirreeffata.
Dhaabbatni oomisha xiyyaaraa Ameerikaa Boeing lafa balaa ET 302 ragaa haaraa argate booda xiyyaarota 737 Max hunda hojii dhaabsise.
Balaa Xayyaaraa ET302: Yaaddoo balaliinsaa akkamiin to'anna
Balaan xiyyaaraa tibbana mudateen namoonni hedduun imaluu yaadda'aa akka jiran ni hubatama. Garuu balaa geejjibaan mudatu keessaa kan xiyyaaraa baayyee muraasa, namoota miiliyoona 2.5 keessaa tokkodha. Yoo rakkoon akkanaa isin mudatee xiyyaara yaabuuu sodaattan maal gochuu akka qabdan ogeeyyiin waa'ee sammuu qoratan akkanaan lafa kaa'aniiru.
Balaa Xayyaaraa ET302: Duraa duuba taateewwan balaa xiyyaaraa addunyaa kanaa
Duraa duubaa taateewwan balaa xiyyaaraa addunyaa bara 1998 irraa eegalee hanga ammaatti jiru.
Balaa Xiyyaaraa Itoophiyaa: Bulchiinsi Aviyeeshinii US Xiyyaarri 'Boeing 737 Max 8' qilleensaaf mijataadha jedhe
Bulchiinsi Aviyeeshinii biyyoonni adda addaa gosa xiyyaara gaafa Dilbataa Itoophiyaa keessatti kufee namoota galaafate balaliisuu dhaabuusaanii mormeera.
Balaa gaddisiisaan daandii xiyyaaraa Itoophiyaa mudate kun yeroo lammaffaadhaafi, lameenuu xiyyaara haarawa gosa Booyingi ta'een mudatan.
Buufata Xiyyaaraa Finfinnee Boolee: Buufataalee xiyyaaraa gurguddoo shanan Afriikaa keessaa
Buufanni Xayyaaraa Idil-Addunyaa Boolee Dilbata dabre hojii babal'inaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 363 baasuun xumure eebbifameera. Afriikaa keessaa buufataalee xayyaaraa gurguddoo shanan akka itti aanuutti isinii dhiyeessineerra